Kaadị asụsụ maka ịmụ asụsụ mba ọzọ. Ụzọ kachasị mma nke isi okwu
Mgbe o bugoro ihe dị ka puku okwu iri na iri ma jiri ha mee ihe n’asụsụ, m nwere ike ide akụkọ banyere usoro m, nke m nwere olileanya inyere gị aka ịgafe otu ụzọ na arụmọrụ kachasị elu, n’oge mkpirikpi na obere njehie.
Akpa, m na-esetịpụrụ onwe m ihe mgbaru ọsọ nke ịmụta asụsụ 500 kachasị eji mee ihe n’asụsụ Bekee ma chọpụta ọnụ ọgụgụ nke okwu ndị e ji mee ihe, bụ ndị gbakwunyere na nyocha.
1. Ike ịmepụta ma chekwaa ọtụtụ kaadị
2. Nkọwa maka ịchekwa na nyochaa olu nke ihe mmụta ahụ
3. Ikike ibudata data ọ bụla site na akwụkwọ ederede na ọrụ nke akụrụngwa okike nke kaadị iji mee ihe agụmakwụkwọ nke gị
4. Igwe olu akpaaka nke kaadị niile na iwu achọrọ, na ọnụego ugboro ugboro na ọrụ nke iji ihe ọkpụkpọ egwu ege ntị n’ihe ọmụmụ ahụ n’oge ọ bụla
5. Ịmepụta data nchekwa dị iche iche na akụkụ dịgasị iche iche nke ndụ
6. Ịmepụta esemokwu asụsụ na ihe oyiyi iji mepụta mmekọrịta na visual
7. Ọrụ n’ejighi ịntanetị na usoro ụgbọelu
8. Igwe igwe nchekwa maka okwu okwu siri ike
9. Njikere ojiji
10. Omume a na-eme kwa ụbọchị maka okwu isi
11. Ịma ọkwa nke mmemme ndokwa
12. Okwu a na-ahazi nke na-agbanwe agbanwe
13. Na-ebufe kaadị gaa ọdụ data
14. Ikike ịmụta asụsụ mba ọzọ na asụsụ dị iche iche n’otu oge
Ebe m na-enwechaghị ahụmahụ na-emepe ngwa ngwa maka sistemụ arụmọrụ gam akporo, amalitere m ịrụ ọrụ na nsụgharị mbụ nke LingoCard maka smartphone m na n’ime ọnwa ole na ole na ngwa ngwa ngwa mbụ na kaadị asụsụ na otu nchekwa data (otu oche) dị njikere. Iji zụlite ihe ndị dị mgbagwoju anya, amalitere m iji nhọrọ ndị mmemme na-atụle ndị ọkachamara ọkachamara m maara. Ụmụ okorobịa ahụ nwere mmasị n’echiche m, ndị na – anụ ọkụ n’obi wee malite isonyere ọrụ ahụ. Mgbe anyị mejuputara echiche anyị, anyị kpebiri na anyị agaghị akwụsị ma mepụta ọtụtụ ngwaọrụ ndị pụrụ iche maka usoro sistemụ abụọ: Android na iOS. Anyị na-akwado ngwa anyị na Google Play na ụlọ ahịa Apple maka n’efu.
Ruo ọtụtụ ọnwa, ọtụtụ iri puku mmadụ gburugburu ụwa malitere iji ngwa anyị n’enweghị ụgwọ ọ bụla, anyị natara ọtụtụ akwụkwọ ozi ekele, ihe ngosi-nke-ezughị-akwụkwọ ozi na aro banyere otu esi emezi ngwaahịa ahụ, nke anyị bụ ekele. N’ihi ya, anyị nwere ọtụtụ ọrụ na echiche ọhụrụ.
Ka ị na-emikpu n’ime asụsụ asụsụ, ọ bịara ghọta na ọ dị mkpa inwe ike ịmepụta ahịrịokwu ngwa ngwa. Ọ bụ nghọta nke ahịrịokwu na ahịrịokwu ndị na-eme ka okwu gị kweta maka mkparịta ụka na nsụgharị ọsọ ọsọ. Ya mere, e kpebiri ime ka kaadị dị na ahịrịokwu, okwuokwu na idiom. Ugbu a, na ngwa anyị, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ narị puku kaadị asụsụ na ụyọkọ okwu na ahịrịokwu dị iche iche.
1. Ndepụta nke kaadị kalịnda, ebe ị nwere ike ịhụ kaadị niile n’otu oge ma pịgharịa data nchekwa / ala. Kedu kaadị ọ bụla nwere ike isi na listi ahụ tụgharịa site na ịpị bọtịnụ ntụgharị.
2. Mepee kaadị kaadị. N’ebe a, ị nwere ike mepee kaadị ahụ n’ụzọ zuru ezu na ọdịnaya ederede buru ibu na swipe niile kaadị n’aka ekpe / nri. Na ọnọdụ a, enwere ike idezi kaadị, zipụ ha na nchekwa data na-arụsi ọrụ ike. Enwere ike itinye ihe osise na foto na kalịnda iji mepụta “ihe ngosi anya”. A na-akpọfe kaadị ọ bụla gaa n’akụkụ nke ọzọ site na ịpanye ebe ọ bụla na ederede ederede.
Na-arụ ọrụ maka nsogbu nke enweghi oge maka ọmụmụ ihe, anyị kpebiri ịmepụta ihe ọkpụkpọ egwu pụrụ iche nke ga-aza ihe ọ bụla ederede na kaadị ọ bụla e kere eke n’usoro ọ bụla, ntụgharị n’etiti okwu mba ọzọ na nsụgharị ha. N’ihi ya, a pụrụ ịmụ asụsụ mba ọzọ n’otu aka ahụ na ịge egwu n’ebe ọ bụla na n’oge ọ bụla. Ugbu a, a na-emepụta ngwá ọrụ a na-enwe ike ige ntị n’ihe dị ka asụsụ 40-50, dabere na ngwaọrụ na ikpo okwu ji. Ekwenyere m na mgbe obere oge, onye ọkpụkpọ anyị ga-arụ ọrụ na asụsụ niile a maara nke ụwa.
O nwekwara ike ịbụ ihe dị mkpa iburu okwu n’isi, dịka ọmụmaatụ, n’usoro mkpụrụ edemede, na ndepụta nke mkpụrụ edemede, enweghị usoro, na isiokwu, wdg.
N’ọdịnihu dị nso, anyị na-eme atụmatụ ịmepụta ngwá ọrụ maka ịchọta ndị ọkà okwu ala na ọrụ ogbako vidiyo, nke ị nwere ike ịmepụta kaadị asụsụ ọhụrụ n’oge mkparịta ụka ma ọ bụ nkuzi.
Tụkwasị na nke a, site n’enyemaka nke mpempe akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịme okwu okwu ziri ezi ma ọ bụ ahịrịokwu. Iji mee nke a, anyị na-emejuputa atumatu ma na-emepe emepe na njirimara okwu nke ga-ege ntị na ịkpọ okwu gị ma gosipụta mmejọ gị.
Usoro Leitner bụ usoro eji eme ihe n’ụzọ dị irè site n’iji mbadamba kọlụm nke onye nta akụkọ sayensị Germany bụ Sebastian Leitner nyere n’afọ ndị 1970.
A na-eji usoro mpempe akwụkwọ a eme ihe dị iche iche dị ka otu onye mmụta si mara onye nke ọ bụla n’ime igbe mmụta Leitner. Ndị na-amụ ihe na-agbalị icheta ihe ngwọta e dere na flashcard. Ọ bụrụ na ha nwere ihe ịga nke ọma, ha na-eziga kaadị na-esote. Ọ bụrụ na ha ada, ha na-eziga ya na nke mbụ. Onye ọ bụla na-esote otu nwere oge dị ogologo oge tupu a na-achọ ka onye mmụta na-elegharị na kaadị. Enwere ike iji usoro a ma ọ bụrụ na ị mụta asụsụ nke asụsụ mba ọzọ, nakwa maka iburu ozi ndị ọzọ.
Ị ga-enwe ike iji usoro Leitner jiri ngwa anyị. Enwere ike ịkpalite Flashcards n’ọtụtụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ị na-ebu ihe ọzụzụ na ngwa ma ọ bụ nanị họrọ otu akwụkwọ ọkọwa okwu dị njikere, mgbe ị na-agagharị na kaadị, ị nwere ike ịkwaga ha na nchekwa data “amụrụ”, hapụ ha na oche ma ọ bụrụ na ị pụghị ozugbo cheta ha, ma ọ bụ bufee okwu ndị kacha sie ike na nchekwa data nchekwa. Mgbe ahụ, ị ​​na-amụ ihe nchekwa data dị na mbụ, wee họrọ na site n’oge ruo n’oge, gbanwee ihe omumu ahụ n’ime ihe ọmụmụ nchekwa data.
Ụbụrụ anyị aghọtaghi ihe mere o ji dị mkpa icheta ọtụtụ okwu ọhụrụ ma na-agbalịsi ike iwepu ozi na-adịghị mkpa. Iji merie nsogbu a, ọ dị anyị mkpa iji ụbụrụ mee ka ụbụrụ mee ya. Chegodị na iji cheta otu puku okwu ọhụrụ, ọ dị gị mkpa ịmepụta ọtụtụ narị puku mmadụ ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ nde ntanetị ọhụrụ gị n’isi! N’ihi ya, anyị na-aghọkwu ndị maara ihe.
Iji mezuo ihe mgbaru ọsọ ndị a, anyị na-etolite software anyị pụrụ iche nke a pụrụ iji tụnyere ụda maka ịmepụta njikọ ọhụụ ọhụrụ na ụbụrụ – naanị ị ga-anakọta ihe ndị kwesịrị ekwesị ma tinye mgbalị iji nweta ihe kacha mma.
Andrew Kuzmin 11.06.2018